Sentinel Lobby 3 waa addonkii saddexaad iyo kii ugu dambeeyay ee ►Lobb Miner, softiweerkii ugu horreeyay ee kuu oggolaanaya inaad kormeerto waqtiga dhabta ah fino a 20 miis online.
Sidee baad ku garanaysaa Sentinel Lobby waa seddex nooc oo software-ka roulette ah oo ka faa'iideysanaya kormeerka miisaska ay sameeyeen ►Lobb Miner inaad isku daydo inaad ku guuleysatid adigoo u ciyaaraya ama ka soo horjeeda isbeddellada fursadaha fudud (►Sentinel Lobby 1), halkii aad ka heli lahayd lambarro keliya (►Sentinel Lobby 2).
Cutubkan ugu dambeeya, waxaan ka walwalsan nahay isku dayga inaan ka faa'iideysano tirooyinka qabow ee sumcadda xun.
Si loo isticmaalo barnaamijkan markaa waa lagama maarmaan in horey loo soo iibsaday ► buug-gacmeedkaLobb Miner, la'aanteed ma suurtoobayso in laga faa'iideysto barnaamijkan, illaa aad horey u haysato qalab kale oo aad lambarro kaga soo qaadan karto miiska roulette oo aad ugu keydiso hal ama in ka badan faylasha qoraalka.
Sidee Lobby Sentinel u shaqeeyaa 3
Sentinel Lobby 3 ficil ahaan waxay isku dhejisaa faylasha qoraalka lagu duubay waqtiga dhabta ah ►Lobb Miner wuxuuna faahfaahinayaa taxane tirakoobyo la xiriira dib u dhaca kooxaha oo ka kooban lambar 1-2-3-4-5-6.
In Lobby Sentinel 3 fikradda dib u dhaca ayaa dib loo qaabeeyay sida soo socota: laga bilaabo wareegyada lagu duubay miisaska kala duwan, barnaamijka softiweerku wuxuu tirooyinka siiyaa hadba sida ay u kala badan yihiin wuxuuna u kala qaadaa 6 koox, oo ka kooban 1 ilaa 6 lambar, oo leh ah soo noqnoqoshada hoose.
Halkaa marka ay marayso malaayiin goos goos ah oo aan kala sooc lahayn oo dherer la mid ah tirada wareegyada la duubay ilaa bartaas ayaa loo ekaysiiyey e Sentinel Lobby 3 waxay xaqiijineysaa, iyadoo ku saleysan kooxaha shaqsiyadeed, in inta jeer ee tirooyinka la weydiinayaa ay aad ugu dhowdahay inay kordhaan iyo in kale.
Sida aad ku arki karto sawirka, waxaan xushay kaliya miisaska la heli karo, gaar ahaan iska ilaalinta miisaska sida Lightning Roulette, Quantum Roulette, iyo sidoo kale dhammaan roulettes otomaatig ah, maadaama wax soo saarka miisaskan had iyo jeer aan gebi ahaanba ahayn kala-sooc.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad gujisaa badhanka Reload Miisaska Roulette, sidan ayaa lagu rari doonaa Sentinel Lobby 3 dhammaan faylasha miisaska kala duwan ee la xushay runtiina waxaad arki doontaa in lambarada wareegyada diiwaangashan ay sidoo kale soo muuqan doonaan (Safka wareega), halka sadarka koowaad (Khamaarka #) wuxuu u adeegi doonaa oo keliya inuu aqoonsado jadwalka leh lambar horusocod ah 01, 02, 03, iwm
Marka hawlgalkan fudud la sameeyo, waxaan markaa ku lafaguri karnaa miisaska isku xidhan ee kaladuwan laba siyaabood oo kala duwan: ama dhammaan isku xigxiga adigoo riixaya badhanka Sawirada Dhamaan Miisaska, ama midba mar shaqsi ahaan, adigoo gujinaya badhamada kala duwan ee leh goobaabada cas.
Waqtigan xaadirka ah waa lagama maarmaan in la qaato hakad lama huraan ah si si fiican loogu sharaxo nooca tirakoobka lagu lafagurayo Sentinel Lobby 3.
Sidii aan ku bilaabay sharaxaad ka hor, Sentinel Lobby 3 mar alla markii dhamaan miisaska miisaska kala duwan la rakibo, isla markaaba bilow sameynta tirakoobkii ugu horreeyay, adoo ka dhigaya 250.000 oo tallaabo (qiimaha lagu tilmaamay berrinka Jilmooyinka #) + 12 wareejin (qiimaha lagu muujiyey duurka + Wareegyo).
Tusaale ahaan jaantus al Shaxda 02 waan diiwaan gelinay (mahadsanid ►Lobb Miner) 373 wareejin, sidaas Sentinel Lobby 3 wuxuu jaangoyn doonaa 250.000 qaybood oo tirooyin ka kooban 373 + 12 = 385 oo wareejin ah.
Sidan oo kale, tirakoobku wuxuu dabooli doonaa tiro yar oo wareejin ah oo ka badan kuwa dhab ahaan la duubay, laakiin sidaad ogtahay duubista Lobby Miner waa celcelis ahaan tirooyinka 6/7 goor dambe marka la barbardhigo waqtiga dhabta ah, markaa tani waxay naga caawin doontaa inaan soo dhexgalno waqtiga wanaagsan ka dib ma ahan inuu seego dhammaan fursadaha suurtogalka ah ee lagu ciyaaro.
Falanqeyntan koowaad ka dib sida aad ku arki karto Shaxda 2 ee Xaddid safka kooxaha waxaa lagu muujiyey cagaar Cool4, Cool5 e Cool6, waxa loola jeedaa?
Waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan Shaxda 02 afarta nambar ee ugu yar (Cool 4) waxay leeyihiin guud ahaan soo noqnoqoshada (wadarta wax soo saarka) oo u dhiganta 4, halka jilitaanka aan kala sooca lahayn uu muujinayo in 17-ka xiga ee soo socda tiradaasi ay noqoneyso "ugu yaraan" la mid ah 12.
Sidaa darteed waxaan haynaa calaamadii ugu horaysay oo ah in 12da sor ee soo socda ugu yaraan hal lambar "waa" inuu ka mid noqdo 4ta qabow (qabow), tan iyo markaa qeybta xigta waxaan ku dari doonnaa lambarada 6/7 ee naga maqan marka la barbar dhigo waqtiga dhabta ah. , kaliya dadka kale ayaa sii joogi doona 6/7 wareejin si ay u noqoto tirakoobka jilitaanka Rng inuu run noqdo (ama maahan).
Guddiga La Dagaalanka
Haddii ka dib baaritaanka ugu horreeya ee dhammaan wareegyada la duubay aynaan ogaan karin miisaska suurtagalka ah ee la ciyaari karo, waxaan sidoo kale go'aansan karnaa inaan ku sameyno baaritaan cusub oo keliya ugu dambeeya ee x miiska.
Ma ahan wax aan caadi ahayn in, haddii tusaale ahaan 400 wareega miiska aysan jirin wax calaamado ah, adoo dooranaya ikhtiyaarka Last iyo tirada wareegyada ee dib loogu celinayo tirakoobka (100-kii ugu dambeeyay, 150, 200, iwm), jilitaanka cusub ee aan kala sooca lahayn wuxuu iftiiminayaa fursadaha ciyaarta ee suurtogalka ah.
Marka aan helno weerarka suurtagalka ah, waxaan ku riixi karnaa badhanka wareegga cagaaran, kaas oo si toos ah noo geyn doona daaqada xigta, taas oo ah guddiga Guddiga La Dagaalanka.
Isla marka aan gujino mid ka mid ah badhannada leh wareegga cagaaran, guddigan ayaa furmaya, halkaas oo jilitaan cusub oo Rng ah uu si toos ah uga bilaabmayo, laakiin markan 2,5 milyan oo tallaabo ah (goob Jilmooyinka #) oo ka kooban tirada wareegyada dhab ahaan ka diiwaan gashan miiskaas, oo lagu daray 6 wareegyada (Campo + Wareegyo), oo u adeegta sidii hore si loogu daro 6 wareegyo galka si loo matalo, si sax ah maxaa yeelay markaa waa inaan ku darnaa 6/7 wareegyada dhabta ah haddii aan go'aansano inaan si dhab ah u furno miiskaas.
Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay ma aha wax aan caadi ahayn in ka dib markii la xusho miiskii guddigii hore, kan cusub iyo saxsan Jilitaanka 2 milyan iyo badh nus ka mid ahi ma muujinayo wax fudud oo ku habboon qaadista weerarka (tusaale ahaan sawirka kore ee kooxaha 6da ugu yar ee tirada soo noqnoqda, inta ugu yar ee la helay waxaa la helay 23, oo la mid ah inta jeer ee ugu yar ee la diiwaan geliyey) by jiliyaha isagoo ku daraya 6 wareega dheeriga ah).
Hadday, dhinaca kale, ka dib tijaabada cusub ee bakhtiyaanasiibka ah, fursadaha ciyaarta la muujiyo sida ku cad shaxanka (labadaba kooxdu waxay ka kooban tahay #5 che da #6 nambarada), markaa waa inaad isla markaaba furto miiska ciyaarta (turubka turkeyga tusaalaheena) kuna dar dar darida dhabta ah lambarada 6/7 ee ka maqan joogitaanka aad ku aragto safka ka hooseeya eber qeybta kore.
Jaantuska, tirooyinka ugu dambeeya ee miiska ka haray waa 2 oo ay ku xigto 1, haddii taariikhda jadwalka aan ku aragno in qaar maqan yihiin, ka dibna kaliya dhagsii nambarka ku habboon ee aad ku aragtay jadwalka korka garaafka oo tanina si toos ah loogu daro tiirka joogtada ah.
Haddii si kadis ah aan khalad ugu galno gujinta lambarka, kaliya laba jeer guji lambarka qaldan ee safka waana la tirtiri doonaa.
Marka wareega oo dhan la cusbooneysiiyo, waa inaad assolutamente Riix badhanka RNG Refresh, taas oo asal ahaan soo celinaysa jilid kale oo ah 2,5 milyan oo taran (+ 6 wareegyo dheeri ah).
Hadday xitaa ka dib imtixaankan ugu dambeeya weli ay muuqato cagaaran fursad lagu ciyaaro, markaa waxaa loo maleynayaa in gudahood 6 wareejin ugu yaraan mid ka mid ah 5 ama 6 lambarrada yar ee soo noqnoqda ay dhab ahaan soo bixi karaan.
Sentinel Lobby 3 waxyaabaha muhiimka ah buluug ah tirooyinka yar ee soo noqnoqda, taas oo mararka qaarkood xitaa ka badnaan karto 6, tani waa sababta oo ah haddii, sida sawirka ku jirta, ay jiraan xitaa 5 lambar oo isdaba joog ah oo 5 ah, waa inaan doorannaa waxa la sameynayo, xaaladdan waxaan kaliya ku garaacayaa lambarrada a inta jeer ee 2-3-4, oo noqonaysa 33, 22, 12 iyo 35, wadar ahaan 4 lambar e ilaa 6 wareeg.
Haddii nasiib daro mid ka mid ah tirooyinka leh tirada soo noqnoqota ee 5 uu isla markiiba soo baxo markaa waan joojinayaa oo dib ayaan ugu laabanayaa si aan u raadiyo fursad kale oo ciyaarta ah Qolka Xakamaynta.
Tilmaamaha ugu dambeeya
Haddii shaki kaaga jiro ►YouTube helay fiidiyowyo si cad u muujinaya sida Sentinel Lobby 3, sida aad arki doonto, ugaarsiga fursadaha ciyaarta waa in lagu sameeyaa dhammaan wareegyada iyo ugu dambeeya ee x iyo xaaladaha ciyaarta ma maqna, waxa ugu muhiimsan sida had iyo jeer waa in la hagaajiyo joojinta ka hor inta aan la bilaabin ciyaarta (50/100 cutub halkii kulan / maalin), laakiin ka sarreeya dhammaan Marna sharad ka badan 6 wareejin weerar kasta, sababtoo ah tirakoobka wuxuu ku saleysan yahay tiradaas saxda ah ee wareega iyo mar dambe.
Anigu badiyaa tallaalkii ugu horreeyay ayaan ku guuleystaa waxaan sidoo kale isku dayaa mid kale oo sii socoshada ah, haddii aan ku guuleysto ok oo aan isku dayo mar kale, haddii kale waxaan isla markiiba ku noqdaa guddiga weyn si aan u raadiyo fursado kale oo ciyaar ah.
Haddii aad aragto in kombuyuutarkaagu uu waqti dheer ku qaadanayo ka shaqeynta si aan kala sooc lahayn, waxaad sidoo kale hoos u dhigi kartaa qiimayaasha asalka ah (250.000 guddiga qolka kontoroolka iyo 2.500.000 ee guddiga la dagaallanka) oo tusaale ahaan u dhig 150.000 kan hore iyo kan labaadna 1.500.000. , tani adiga ayey kugu xiran tahay, samee tijaabooyinka qaar ka dibna go'aanso, waxa muhiimka ah waa in la hagaajiyaa tirada wareegyada dheeraadka ah ee gegooyinka, kuwaas oo ah 12 guddiga koowaad iyo 6 kan labaad.
Soo Degso Fayl	LSentinel3.zip - 3 MB